စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: July 2009
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံး နိုင်နင်းအောင် သရုပ်ဆောင်လာလိုက်တာ
အစကတည်းက ဇာတ်သိမ်းမပါတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားမှာ
ဇာတ်ကားပီးခါနီးဆို ရောက်လာတတ်တဲ့ ရဲသားတွေတောင် စောင့်နေပီ
သေကွဲက ပရိသတ်ရဲ့ရင်ကို ဖမ်းစားနိုင်ပါ့မလား
မင်းသမီးအမေမှာ ဘာလို့ နှလုံးရောဂါရှိမနေတာလဲ
မင်းသားမှာ မွေးစားအမတစ်ယောက်လောက် ပါရင်တောင် ဇာတ်က လှနေရဲ့
နောက်ထပ် ဇာတ်ပို့တစ်ယောက်လောက် ထည့်ထားရမှာ
ဒါဆို နောက်ဆုံးမိနစ်ရောက်တဲ့အထိ မျှော်လင့်ချက်တွေပေးထားရမလား
ဇာတ်သိမ်းက ခပ်ဆန်းဆန်းဆို ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမလား
နဂိုထဲက ဇာတ်သိမ်းမပါတဲ့ ဇာတ်ကားကို
မင်းသမီးက နောက်တစ်ကားအတွက် ပညာကုန်ထုတ်သုံးနေလေရဲ့
ဇာတ်ရံတွေကတော့ နေ့တွက်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေတယ်
မဆီမဆိုင် လူကြမ်းတွေက ဇာတ်သိမ်းမှာ သူတို့လုပ်ကွက် အပြည့်ရချင်တယ်ဆိုပဲ
မာမီတွေက မင်းသမီးနဲ့ ထုတ်လုပ်သူအကြောင်း မဲ့ရွဲ့တင်းဆိုနေလေရဲ့
ပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ ဖြစ်ချင်လောဘတွေက ဇာတ်သိမ်းဖို့ ခက်နေပီ
တုံးတိတိကြီးဖြတ်လိုက်ရင် ရုံတင်ရင် ရင်တုန်ရလိမ့်မယ်
ပြီးပါပီ စာတန်းထိုးဖို့ အချိန်ကလဲ နီးနေပီ
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဇာတ်သိမ်းခန်းကို ရောက်လာပါတော့တယ်……..
ပြည့်စုံ (၃၁-၇-၂၀၀၉၊ ၉း၃၂ pm)
at 7:37 AM Labels: ကဗျာမပီ၊ စာမပီ
ချစ်ခြင်းဟာ နီးခြင်း ဝေးခြင်းနဲ့ ဆိုင်သလား
သူ့ကို သတိရခြင်းများမှာ တခါတလေ မြူတွေလိုပင် လျော့ပါးလာနေပီ.
ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာ အချိန်ကုန်ရင်း....
ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့လေးမှာ ပျော်မွေ့ရင်း...
ကိုယ့်ရဲ့ ကဗျာတွေနဲ့ ကာရံစပ်နေရင်း....
ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောနေရင်း...
ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေမှာ စီးမျောရင်း....
ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကို တရံတခါမှ သတိရခြင်းတွေ များလာတဲ့အခါ.....
ချစ်ခြင်းဟာ နီးခြင်း ဝေးခြင်းနဲ့များ ဆိုင်နေသလား ချစ်သူ.......
ဒီလိုအချိန်တိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်တဲ့စိတ်က
မင်းကို သတိမရတာထက် ကိုယ့်ရင်ကို ပိုထိခိုက်စေပါတယ်
ဟိုမှာဘက်ကမ်းက မင်းက သတိရတယ်လို့ ခန ခနပြောနိုင်ပေမဲ့
ဒီမှာဘက်ကမ်းက ငါကတော့ သတိရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေး
နှုတ်ဖျားက ဖွင့်ဟဖို့တောင် အချိန်မအားနိုင်တဲ့အဖြစ်
ဖွင့်ဟပြောတဲ့ အချစ်မှ တန်ဖိုးကြီးသတဲ့လားကွယ်
ပြည့်စုံ (၂၈-၇-၂၀၀၉၊ ၁း၁၅ am)
at 6:49 AM Labels: သတိရခြင်းများ
တခါတလေမှာ တချို့စကားလုံးတွေက မလိုအပ်ဘဲ မပြောသင့်ပါဘူး
ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်မှလွဲရင် တခြားဘယ်သူမှ ခရေစေ့တွင်းကျမသိပါဘူး
ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောမှပဲ သူများက သိတာပါ
ဒါကို ဟိုလူ့တော့ မသိပါစေနဲ့ ဒီလူ့ကိုတော့ မပြောပါနဲ့
ထားလိုက်ပါ ဒီလောက်တော့ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်
လူတိုင်းမှာ လျှို့ဝှက်ထားချင်တာလေးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်.
ဒါပေမဲ့ TOP SECRET, TOP BIG ISSUE ဆိုပီး ကမ္ဘာနဲ့တောင် ချီလောက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို
ဘယ်သူမှ မသိပါစေနဲ့နော် ဒါကလေ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမို့လို့ပါ သူများတွေသိလို့မဖြစ်ဘူး.
OPEN SECRET လုပ်တတ်ပါတယ်…
လူတိုင်းကို မသိလဲ မသိစေချင်
သူလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလဲ လူတိုင်းကို သိစေချင်ပါတယ်
ဒါကို OPEN SECRET လို့ ကျမကတော့ အမည်တပ်ထားပါတယ်
ဒါပေမဲ့ သူပြောလိုက်တဲ့သူကို အမူတွဲ ဆွဲတတ်ပါတယ်။
နင့်မို့ပြောတာသိလား ဆိုပြီး နင်တွေ တန်းစီနေတတ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းပေါက်ကြားရင် ပြောခံရသူကပဲ ဖွတာဆိုပီး တရားခံခေါင်းတပ်လိုက်တာပါ.
အစကတည်းက လူတွေမသိစေချင်ရင် ဘာလို့ပြောကြပါသလဲ
နောက်ပီး ဘယ်သူမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ အတင်း
အစ်အောက် ရိုက်နှက်ပီး မေးနေတာမဟုတ်ဘူး.
စကားကြုံလို့ ပြောလိုက်ရတာလဲ မဟုတ်ဘူး.
သူများ မပြောပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့ စကားလောက် အခံရခက်တာလည်း ရှိမယ်မထင်ဘူး
ကိုယ့်ဘာသာနေရင်းတန်းလန်းနဲ့ လာပြီး အမူတွဲဆွဲတဲ့ သဘောပါပဲ
သိစေချင်လို့ လာဖွပီးကာမှ ပြန်ပိတ်တတ်တာလောက် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူလည်းမရှိပါဘူး။
လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ် ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်
ကိုယ်အသက်ရှင်မှုနဲ့ ကိုယ် ကြိုးစားရုန်းကန် နေရတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ
ကိုယ့်နှာခေါင်းပေါက်တောင် ကိုယ့်ဟာကို တခါတလေ အသက်ရှုလို့ မဝပါဘူး
သူများကိစ္စတွေကို တတ်နိုင်ရင် ၀င်မပါတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ဖြစ်နိုင်ရင် နားတောင် မထောင်သင့်ပါဘူး။
ကျမ အဖေ အမြဲပြောတဲ့ စကားတခွန်းရှိပါတယ်
“သမီးလေး သူများ ကိုယ်ပျက်တိုင်း မပျက်နဲ့ ကိုယ်ပါ လိုက်ပီး ကိုယ်ပျက်တတ်တယ်.
ကိုယ်ပျက်တယ်ဆိုတာ နူတာပဲတဲ့. ဘယ်တော့မှ အနူမဖြစ်စေနဲ့တဲ့လေ.”
Posted by မဆုမွန်
at 6:49 AM Labels: ဆုံးမစာ
ငါ့စိတ်က အရင်အတိုင်းပဲ မပြောင်းလဲခဲ့ဘူးကွယ်
ပြည့်စုံ (၂၅-၇-၂၀၀၉၊ ၁၁း၄၄ pm)
at 8:28 AM Labels: ကဗျာ၊ သတိရခြင်းများ
ဘဝဟာ ရင်ခုန်စရာ မကောင်းပါဘူးတဲ့
ရယ်ရင်း မောရတယ် ချစ်သူ
ပြည့်စုံ (၂၆-၇-၂၀၀၉၊ ၆း၃၅ pm)
at 1:27 AM Labels: ကဗျာ၊ ရင်ခုန်သံ
ဒီလိုနဲ့ကဗျာဆရာတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပြန်ဘူး
အိမ်ပြန်ချိန်တွေကို သတိရတတ်တဲ့ 
မေမေ့အနမ်းတွေကို တမ်းတလို့ 
ရင်ထဲက သီကုံး စကားလုံးတွေရင်ဖွင့် 
(ကျမရဲ့ ချစ်လှစွာသောမောင်ကလေးက ကျမအတွက်ဆိုပီး ရေးပေးတဲ့ မေမေ့တမ်းချင်းကဗျာလေးပါ၊ အမေ့ကို လွမ်းနေတဲ့အချိန် သူစပ်ပေးထားခဲ့တာပါ။)
at 2:11 AM Labels: ကဗျာ၊ အငှားရင်ခုန်သံ
ဂျီတော့ဖွင့်တိုင်း အလိုအလျောက် ခလုတ်နှိပ်မိတာ
ဒါတွေဟာ အိပ်မက် မက်နေပြန်ပီလား
လားပေါင်းများစွာနဲ့ ငါ့အတွေးတွေ ရှုပ်ထွေးလာနေပြန်တယ်
လမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့ ဖြတ်ခနဲ မြင်ယောင်မိတာ
ငါဟာ ကျိန်စာတွေများ မိနေသလား
ငါမေ့ချင်နေပီ အရင်က အကြောင်းတွေကို
ငါ ပြန်မရောက်ချင်တော့ဘူး အရင်အတိတ်ဟောင်းကို
ပြန်မရေးချင်တော့ဘူး အရင်က ခံစားချက်တွေကို
ပြည့်စုံ (15-7-2009/ 8:00 PM)
at 1:04 AM Labels: ကဗျာ၊ အတွေးပုံရိပ်
အခုတော့ အုန်းပင်တွေလဲ မရှိတော့ဘူး
အရင်ကလိုပဲ ငါ့ကို မှတ်မိပါ့ဦးမလား
ပြည့်စုံ (၂၁-၇-၂၀၀၉၊ ၁း၃၀ am)
ကဗျာမပီ၊ စာမပီပါ... အမေ့ကို သတိရလို့ ရေးဖွဲ့လိုက်တာပါ.... :(
at 9:51 PM Labels: ကဗျာမပီ၊ စာမပီ
ငါ မင်းအတွက် အပြစ်ဆိုတာ မယူချင်ပါဘူး
တခါတရံမှာ လမ်းလွဲဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်
ငါ မင်းအနားမှာပဲ အမြဲနေပေးမှာပါ
ပြည့်စုံ (၂၁-၇-၂၀၀၉၊ ၂း၄၅ pm)
at 1:24 AM Labels: ကဗျာ၊ သတိရခြင်းများ
နောင်တ တရားတွေလား ဥပက္ခာတရားတွေလား
မင်းပျော်ဖို့အတွက်ကို တိတ်တိတ်လေး ဆုတောင်းမိတယ်
ကိုယ့်ကိုလည်း တခါတလေ ယောင်ရမ်းပြီး သတိရစေချင်မိပါတယ်
at 10:02 PM Labels: ကဗျာ၊ သတိရခြင်းများ
ပြည့်စုံ (14-1-2009 / 12:30 PM)
at 5:53 AM Labels: ကဗျာ၊ အိပ်မက်ပုံရိပ်
ရေသန့် တွေ အသောက်များလာလို့ ဆိုပြီး
(အနော့်အကိုတစ်ယောက် ရေးစပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်ရှုခံစားစေချင်လို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။)
at 10:15 PM Labels: ကဗျာ၊ အငှားရင်ခုန်သံ
နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ အတွေးတွေက အခုဆို တရစ်ပီးတရစ်ပဲ
မနက်ဆို မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ နိုးထလာတတ်တယ်
ညဘက်ဆို ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ အိပ်တတ်လာတယ်
အွန်လိုင်းတက်တိုင်းလဲ မင်းရှိနေမလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ မျှော်မိတယ်
ညကျရင်လဲ ကိုယ့်ကိုများ စောင့်နေမလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ နောက်ဆံငင်မိတယ်
အရင်ဆုံး သတိရမိတာက မင်းကိုပဲ
စိတ်တိုရင် ငထူလို့ ခေါ်တတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
ကော်ဖီအများကြီး မသောက်ဖို့ ပြောတာကိုလဲ သတိရတယ်
ထမင်းစားဖို့ အမြဲပြောတတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
အကြာကြီး အညောင်းမထိုင်ဖို့ မှာတာကိုလဲ သတိရတယ်
ဖုန်းဆက်မယ်လို့ ပြောတာကိုလဲ သတိရတယ်
ညကျ စောစောအိပ်ရမယ်လို့ အမြဲပြောတတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
ညတိုင်း သီချင်းဆိုပြတတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
သီချင်းဆိုပြရင် အိပ်မယ်လို့ ဂျီကျတတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
ဖုန်းချဖို့ကို လက်တွန့်နေတတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
စိတ်ညစ်အောင် မလုပ်တော့ဘူးလို့ ကတိပေးတာကိုလဲ သတိရတယ်
မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ပို့ပေးတတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
ငါ့ရဲ့ နေ့စဉ်ဝတ္တရားတွေကို ဝင်ရှုပ်နေတတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
ငါ့ရဲ့ အတွေးတွေကို စိုးမိုးထားတာကိုလဲ သတိရတယ်
အရမ်းချစ်တယ်လို့ ပြောတတ်တာကိုလဲ သတိရတယ်
တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြောတာကိုလဲ သတိရတယ်
မိုင်တွေထောင်ချီပီး ဝေးနေရတာကိုလဲ သတိရတယ်
ငါတို့ မနီးနိုင်သေးတာကိုလဲ သတိရတယ်
သတိရစရာတွေ ဝိုင်းရံထားတဲ့ ငါ့ရဲ့ဒီနေ့တွေတိုင်းမှာ
မင်းကို သတိရခြင်းတွေနဲ့ ပျော်မွေ့နေလေရဲ့
at 11:47 PM Labels: သတိရခြင်းများ
ငါတို့ရဲ့အချစ်ဟာ နဂိုထဲက လွဲချော်ခဲ့တာပါ…..
ငါက ငါ့ရဲ့ အချစ်တွေကံခေသွားတဲ့အကြောင်း
ငါက ငါ့ရဲ့ မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတဲ့အိပ်မက်တွေအကြောင်း
ငါက ငါ့ရဲ့ ပျောက်ပျက်သွားခဲ့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေအကြောင်း
နင်က နင့်ရဲ့အသည်းကို ခွဲသွားတဲ့ နင့်ချစ်သူရဲ့အကြောင်း
ငါက ငါ့ရဲ့အချစ်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်း
ငါက ငါ့ရဲ့ နာကျင်ခဲ့ရမှုတွေအကြောင်း
နင်က နင့်ရဲ့မှားယွင်းစွာခုန်မိတဲ့ ရင်ခုန်သံအကြောင်း
နာကျင်ရလွန်းလို့ အသက်မဝင်တော့တဲ့ နှလုံးသားက
နင်က နင်အဝေးကို ထွက်သွားတော့မယ့်အကြောင်း
ငါတို့ နဂိုထဲက ဝေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်း
ချစ်သူရေ ဒီလိုနဲ့ပဲ ငါတို့ဝေးကြတာပေါ့
ငါတို့ရဲ့အချစ်ဟာ နဂိုထဲက လွဲချော်ခဲ့တာပါ……
ပြည့်စုံ (6-12-2008/ 5:50 PM)
at 6:57 AM Labels: ကဗျာ၊ ခွဲခွာခြင်းနိမိတ်ပုံ
အချစ်တခုရဲ့ နိဒါန်းလဲ ဖြစ်နိုင်သလို
အချစ်တခုရဲ့ နိဂုံးလဲ ဖြစ်နိုင်ရဲ့
မျှော်လင့်ချက်တခုရဲ့ ရောင်ခြည်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို
ဆုံးရှုံးမှုတခုရဲ့ ပြယုဂ်လဲ ဖြစ်နိုင်ရဲ့
နှုတ်ဆက်ခြင်းတခုရဲ့ နာကျင်မှုလဲ ဖြစ်နိုင်သလို
ကြိုဆိုမှုတခုရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းလဲ ဖြစ်နိုင်ရဲ့
ဝမ်းနည်းမှုတွေရဲ့ မျက်ရည်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရဲ့ အပြုံးတွေလဲ ဖြစ်နိုင်ရဲ့
အောင်မြင်ခြင်းတွေရဲ့ လှေကားထစ်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို
ဆုံးရှုံးခြင်းတွေရဲ့ ခြေချော်မှုတခုလဲ ဖြစ်နိုင်ရဲ့
လမ်းအိုလေးကို ဖဲ့ဆင်းဖို့လဲ ဖြစ်နိုင်ရဲ့
ကိုက ထွက်ခွာနိုင်သူ ဖြစ်ခဲ့ပြီ…..
ပြည့်စုံ (5-12-2008/ 12:00 PM)
at 1:09 AM Labels: ကဗျာ၊ ခွဲခွာခြင်းနိမိတ်ပုံ
သူငယ်ချင်းတယောက် သူပြောပြတဲ့ သူတို့အဆောင်က ရယ်စရာအကြောင်းလေးတခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်
သူက ကျောင်းတက်နေတုန်း အိမ်မှာ မနေချင်လို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပီး အဆောင်မှာ နေကြတယ် သူတို့ သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်စုပီး ငှားနေတဲ့အဆောင်မှာ သရက်ပင်ကြီးတပင်ရှိတယ် ရင်ကွဲသရက်ပင်ပေါ့။ သူတို့ဆီမှာ ပိုက်ဆံပြတ်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အိမ်က ပိုက်ဆံမပို့တဲ့အချိန်တွေဆို သူငယ်ချင်းတွေစုပီး ထမင်းထုပ်ဝယ် အကြော်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ရရာနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စားကြတယ်
တကယ်လို့မှ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ပေါင်နှံပေါ့ ချေးငှားပေါ့ အဲ့တာမှ အဆင်မပြေတော့ရင်တော့ အဲ့သရက်ပင်က သရက်သီးအစိမ်းကြီးတွေကို ဒီအတိုင်း စားကြတယ်လေ .ချဉ်ချဉ်စုတ်စုတ်ပေါ့။
အဲ့ဒီမှာ နာဂစ်လဲတိုက်ရော သူတို့ရဲ့ သရက်ပင်ကြီး လဲသွားတော့ သူတို့ အခု ငိုနေရတယ်လို့ သူက လှမ်းပြောပြတယ် အမှန်တော့ သူက ရယ်စရာလို ပြောတာပါ. သူပြောတဲ့အချိန်မှာ ခနတော့ ရယ်လိုက်မိတယ် နောက်မှ တော်တော့ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်။
သူ့ကိုပြောတယ် အိမ်ကိုပြန်ဖို့ ဒါပေမဲ့ သူပြောတယ် အိမ်ကိုသာ ပြန်သွားရင် သူလုပ်ချင်တာတွေကို ဘာကိုမှ လူကြီးတွေက လုပ်ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့လေ၊ သူပေပေတေတေ လေလွင့်နေချင်တယ်လို့ သူ့အိမ်က စွပ်စွဲပေမဲ့ သူ့ဘဝလေးမှာပဲ သူနေချင်တယ် သူတို့ဘဝလေးထဲမှာ နေရတာကိုပဲ သူတို့ပျော်နေကြတယ်တဲ့. သူတို့မှာ ကြီးကျယ်တဲ့ အနာဂတ်တွေ မရှိပေမဲ့ သူတို့လုပ်ချင်တာလေးတွေ သူတို့ လုပ်နေရတာကိုက သူတို့ရဲ့ဘဝတဲ့
ဒါပေမဲ့ သူတို့ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းမှာ ပါဝင်ကြတယ် နောက် သေနတ်နဲ့ပစ်တော့ ခွေးပြေးပြေးကြတယ် ဘုန်းကြီးတွေ အရိုက်ခံရတော့ အသည်းခိုက်အောင် နာကြတယ် နောက်တော့ လူတွေငြိမ်သွားကြသလိုပဲ သူတို့လဲ ငြိမ်ပီး သူတို့ရဲ့ လက်ရှိဘဝတွေဆီကို ပြန်ရောက်သွားကြတယ်
သူတို့ကို မင်းတို့မျိုးဆက်အတွက် မင်းတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ် ဒါမှမဟုတ် မင်းတို့ မတရားတာကို သိရင် မတရားတာကို မတရားမှန်း လူတွေသိအောင် လုပ်ဖို့ မင်းတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ သူတို့ကို သွားပြောရင် အဲ့တာကို သူတို့က လက်ခံကောင်း လက်ခံကြမယ် မင်းတို့ ဒါတွေကို ဘာလို့ မသိရသလဲလို့ အပြစ်တင်ရင်တော့ သူတို့မှာ အဖြေမရှိဘူး.
ဘာလို့ဆိုတော့ ဒါတွေကို သိရအောင် ဘယ်သူကမှ လမ်းညွှန်မပြသ သလို ဒါတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမှာလဲ သူတို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားချင်ကြဘူး လူကြီးတွေ မကောင်းဘူး ဒါပဲ
ရယ်တော့ ရယ်စရာပဲ ။ လူကြီးတွေက လူငယ်တွေကို နားမလည်ပေးနိုင်သလို လူငယ်တွေကလဲ လူကြီးတွေရဲ့ ရှေးရိုးစွဲဦးဆောင်မှုအောက်မှာ မနေချင်ကြတော့ဘူး သူတို့က သူတို့ လက်တွေ့လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကိုပဲ တန်ဖိုးထားကြတယ် ဟိုအရင် သမိုင်းတွေ နောက်ကြောင်း တွေကို သူတို့ စိတ်မဝင်စားကြတော့ဘူး
အခုလက်ရှိ ဘာလုပ်ခွင့်ရှိသလဲ ဘာလုပ်နိုင်သလဲ ဒါပဲ သူတို့က အနှောင်အဖွဲ့တွေ အသင်းအဖွဲ့တွေကိုလဲ မယုံကြည်ကြပြန်ဘူးလေ
လူငယ်တွေဟာ နိုက်ကလပ်တွေ ဘားတွေမှာ ရောက်နေကြတာ သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားနေကြတာဟာ တကယ်တော့ သူတို့လုပ်နိုင်လောက်တဲ့ ဘယ်လိုအရာတွေမှ သူတို့အတွက် မရှိကြဘူး လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလဲ သူတို့မှာ ရှိကို မရှိကြတာ မလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး လုပ်ရမှန်းကို မသိတဲ့ လူငယ်တွေ အများကြီးရှိကြတယ် ။
တက္ကသိုလ်ဆိုတာကလဲ တကယ်တော့ လူငယ်တွေကိုစုပီး ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ ဖဲရိုက်ဖို့ အရက်သောက်တတ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ လူစုပေးတဲ့နေရာလောက်ပဲ ဖြစ်နေပီ။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးတဲ့ တဖြည်းဖြည်း အဆင့်နိမ့်သထက် နိမ့်လာတယ် ။
သင်တန်းတခုမှာ ဆရာတယောက်က မေးဖူးတယ် ကို့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲတဲ့ What is your Ambition? ပေါ့၊
အဖြေကို ချက်ချင်းပေးဖို့ ပါးစပ်က မဟနိုင်ဘူး။
လူတွေက တစုံတခုကို စောင့်ဆိုင်းနေကြတာချင်း တူကြတယ် စိတ်ကူးတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေသာ ခြားချင်ခြားနားကြမယ် တူညီတာ တခုကတော့ တခုခုကို စောင့်နေကြတယ် ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရာပေါ့
at 2:41 AM Labels: လူငယ့်အတွေး
ငါတို့အတွက်တော့ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းတွေမှာ အသားကျနေကြပြီ
လူ့လောကထဲရောက်ဖို့ ကိုးလ စောင့်ရတယ်
စကားပြောတတ်ဖို့ တနှစ်ခွဲလောက် စောင့်ရတယ်
စာသင်ကျောင်းရောက်ဖို့ ငါးနှစ် စောင့်ရတယ်
ကြီးကောင်ဝင်ဖို့ 14 နှစ်လောက် စောင့်ရတယ်
အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ဆိုတာ တက်ရဖို့ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိ စောင့်ရတယ်
ကံကောင်းရင်ပေါ့လေ ဘွဲ့ရဖို့3နှစ်လောက်တော့ စောင့်ရမယ်
သွားလိုရာရောက်ဖို့ ကျောက်ချထားတဲ့လိုင်းကားပေါ်မှာ ထိုင်စောင့်ရတယ်
အီးမေးတခါပို့ဖို့ ကော်နက်ရှင်ကောင်းတာကို စောင့်ရတယ်
သတင်းဆိုက်တခု ဖတ်ရဖို့ ဆိုင်ကလူအလစ်ကို စောင့်ရတယ်
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်တောင် စားပွဲထိုး လာအမေးကို စောင့်ရတယ်
ချစ်သူရဖို့တောင် သူ့အဖြေကို ရင်ခုန်စွာ စောင့်နေရသေးတာပဲ
ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆို အပြောင်းအလဲကို စောင့်ကိုစောင့်ရမယ်
စနစ်ဆိုးတခုကလွတ်မြောက်ဖို့ မျိုးဆက်တွေတခုစာမက စောင့်နေရဆဲပဲ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ တခုပြီး တခု စောင့်ရသေးတာပဲကွယ်
ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ စောင့်ကို စောင့်ရမှာပေါ့
ဟော ယုံကြည်မှုတခုအတွက်တဲ့ 65 နှစ်စာ စောင့်ရပြန်ဦးမယ်
ငါတို့အတွက်ကတော့ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းတွေမှာ အသားကျနေကြပြီပဲလေ……..။
ပြည့်စုံ (19-11-2007, 12:00 PM)
at 10:52 AM Labels: ကဗျာ၊ မျှော်လင့်ချက်
ဘဝကို ဒုံးခံပီး ရင်ဆိုင်မယ့် သတ္တိအပြည့်ရှိကြတယ်
သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်အရင်းခံကလဲ ရိုးသားကြတယ်
သူတို့မှာ ဆန်းပြားတဲ့ အတွေးတွေလဲ သိပ်မရှိဘူး
သူတို့မှာ လျှောက်ရမယ့်လမ်းတွေကလဲ ရွေးစရာ သိပ်မများဘူး
သူတို့ရဲ့လိုဘတွေကလဲ အခြေခံလိုအပ်ချက် ပြည့်စုံဖို့ပဲ
သူတို့ရဲ့ မျက်နှာတွေမှာ အားမာန်တော့ အပြည့်ရှိကြတယ်
သူတို့က အရာရာကို ကံကိုပဲ ပုံချ
သွားမရှိတော့တဲ့ အဘွားအိုက ခွက်ကလေးတလုံး လက်ဆွဲပီး ပြောရှာတယ်
ထမင်းကြမ်းခဲကလေးကို ပဲကလေး ဆီဆမ်းစားရတာကိုက
သူတို့က နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ မသိကြဘူး
သူတို့က လူ့အခွင့်အရေး ဘာလဲ မသိကြဘူး
သူတို့က သူတို့ရပိုင်ခွင့်ကိုတောင် ဘယ်သူဆီက တောင်းရမှန်း မသိကြဘူး….
ပြည့်စုံ (၂-၅-၂၀၀၉၊ ၂း၃၅ am)
(နာဂစ်နှစ်ပတ်လည် တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာ ရင်ထဲက ခံစားချက်တချို့ကို ဖောက်ထုတ် မိလိုက်တာပါ။)
at 10:50 AM Labels: ကဗျာ၊ မျှော်လင့်ချက်
ဒီနေပဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် အလုပ်ရှုပ်လို့
ဒီလေပဲ ခုနက ရှုတာလဲ ဒီလေပဲ
မနှစ်က မိုးအဟောင်းပဲ ဒီနှစ် ပြန်ရွာတယ်
မသစ်ပုံများ အဟောင်းပုံထဲက ရွေးထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ
ပြည့်စုံ (၂၁-၃-၂၀၀၉၊ ၁၁း၀၀ pm)
at 1:21 AM Labels: ကဗျာ၊ မျှော်လင့်ချက်
လှေမမှောက်ဖို့က အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား
လှေဝမ်းမပေါက်ဖို့က အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား
လမ်းမပျောက်ဖို့က အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား
ပြည့်စုံ (၅-၅-၂၀၀၉၊ ၂း၅၅ pm)
at 9:29 AM Labels: ကဗျာ၊ မျှော်လင့်ချက်
ကွဲကြေနေတဲ့ နှလုံးသားတစုံလဲ ရှိပြန်ရဲ့
တမိုးချုပ်တိုင်း မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာတော့
လူသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့ စိတ်ကူးတွေရှိတယ်
နံရံတွေခြားနေတဲ့ အတွေးအမြင်တွေလဲ ရှိခဲ့ဖူးတယ်
ဘဝတွေ ခြားစေခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေလဲ ရှိနေတယ်
မိုင်တွေထောင်ချီပြီး ဝေးသွားခဲ့တဲ့ ဘဝတခုလဲ ရှိခဲ့ဖူးတယ်
အဆုံးမတော့ ပြုံးပြနေရတဲ့လူတွေပဲ များလာတယ်
ဖုံးဖိနေရတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေပဲ များလာတယ်
ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ စည်းဘောင်တွေကလဲ တင်းလာတယ်
မုန်းမေ့သွားတဲ့ ချစ်ရတဲ့သူတွေလဲ တိုးလာတယ်
အရှိုးရာတွေလို အသည်းမှာ ထပ်ပိုးလာတဲ့ ဒဏ်ရာတွေလဲ တိုးလာတယ်
ပြည့်စုံ (17-11-2008, 7:05 pm)
at 7:31 AM Labels: ကဗျာ၊ မျှော်လင့်ချက်